कि बाबुरामलाई पाता फर्काउ: होईन भने आरोपित सबैलाई जेल पठाउ !- मदन बस्नेत - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > बिचार > कि बाबुरामलाई पाता फर्काउ: होईन भने आरोपित सबैलाई जेल पठाउ !- मदन बस्नेत
बिचार राजनीति विविध
October 10, 2020 January 19, 2021 Raju Thapa230
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अख्तियार लगायतका सम्बन्धित निकायमा प्रमाण सहित उजुरी नहालेर गृह जिल्ला गोरखा पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीले मिलेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको गम्भीर आरोप लगाएपछी आरोपकर्ता भट्टराईलाई नै पाता कसेर तत्काल केरकार गर्नु पर्ने माग उठ्न थालेको छ।
बाबुराम भट्टराई कुनै सामान्य नागरिक वा दल बिशेषका नेता होईनन्, उनी पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत र ओहदाको ब्यक्तित्व हुन्। त्यसैले उनले लगाएको त्यो आरोप पानीमा वायु त्याग गरे जस्तो हल्का रुपमा लिनु हुँदैन।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होईन अन्य थुप्रै परियोजनाहरुमा पनि त्यसरी नै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न सक्छु भन्ने भट्टराई, अख्तियार नपुगेर गोरखा पुगेर किन दाबी गरेका हुन् ? अख्तियार माथी बिश्वास नभए कमसेकम पत्रकार सम्मेलन गरेर नै भएपनी सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्नु पर्ने थियो तर उनले त्यसो गरेनन् किन ? के उनले पनि अरुले जस्तै सस्तो प्रचार र बिरोधि दलको आलोचनाकालागी मात्र आफ्ना समकक्षी उपर त्यत्रो ठूलो आरोप लगाएका हुन् त ? यदि हो भने त्यो अत्यन्त निकृष्ट अभ्यास मानिने छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसमा पनि एउटा विद्वान ब्यक्तित्वको रुपमा कहलिएको ब्यक्तिले भ्युयर्सको संख्या बढाउन र भाईरल हुने लालसाले युट्युबे उरन्ठेउलाहरुले जस्तो “पब्लिक कन्जम्सन” कोलागि गरेको एउटा “पोलिटिकल स्टन्ट” मात्र हो भने त्यो अत्यन्तै गलत हुनेछ। त्यसो गर्नु उनको ब्यक्तित्व, हैसियत र नैतिक आचरण भन्दा बिपरित त हुँदै हो, कानुनी आधारमा पनि दण्डनीय अपराध नै हो। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो ब्यक्तिले त्यसरी सार्बजनिक रुपमा बोलिसके पछी त्यस उपर अबिलम्ब छानबिन हुनै पर्छ र त्यसको सुरुवात उनै आरोपकर्ता भट्टराईबाटै सुरु गर्नु पर्छ। उनको आरोपमा दम छ भने आरोपित दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा र हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलि तिनैजनालाई कारवाहिको दायरामा तान्नु पर्छ , होईन भने झुठो आरोप लगाउने पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै पाता कस्नु पर्छ। लोकतन्त्रमा बोल्ने छुट सबैलाई छ तर अर्काको मानमर्दन गर्ने छुट भने कसैलाई छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेको बाबुराम भट्टराई जस्तो जिम्मेवार ब्यक्तित्वले नै त्यसरी सार्बजनिक रुपमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाई सकेपछी ओलि, दाहाल र देउवा पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने झैं पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोपमा दम छ भन्ने आम जनमानसलाई परेको छ। त्यसैले उनीहरुमा अलिकता पनि नैतिकता छ भने आ-आफ्ले सम्हालेको जिम्मेवारीबाट अबिलम्ब पछी हट्नु पर्छ र आफू माथी लागेको आरोपको छानबिन गर भनेर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु पर्छ। यदि बाबुराम भट्टराई झुठ हुन् भन्ने लाग्छ भने उनीमाथी मानहानीको मुद्दा दायर गरेर प्रतिवाद गर्ने हिम्मत जुटाउनु पर्छ। फरक दलका नेता हुन्, बिरोधकालागि बोले होलान् भनेर हात बाँधेर चुपचाप बसिरहन मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीको भुमिका निर्वाह गरिसकेको ब्यक्ती र ब्यक्तित्वलाई त्यसरी जहाँ मन लाग्यो त्यहिँ र जे मन लाग्यो त्यही वकवक गर्दै हिड्ने छुट दिन हुँदैन। त्यती ठूलो जिम्मेवारी वहन गरेको र त्यो ओहदा र औकातको ब्यक्तित्वले त्यसरी अर्काको मानमर्दन गर्ने र झुठा आरोप र ब्यक्तिगत टिकाटिप्पणी गर्दै हिड्न सुहाउँदैन। त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको कहनी र कथनी सहि हो कि झुठो अबिलम्ब छानबिन गर्नु पर्छ। आरोप लाग्ने माथी पनि छानबिन नहुने र आरोपकर्ता उपर मानहानीको मुद्दा पनि नलाग्ने हो भने त्यसले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ। आरोप लगाउने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री र आरोपित पनि त्यही हैसियतका भएका हुनाले यसलाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन। मुलुक कै जिम्मेवारी बोक्नेहरुको तहमा देखिएको यस्तो आरोप र प्रत्यारोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ र सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउनै पर्छ।
बर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा, भट्टराईले दाबी गरे जस्तो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा कमिसनको लेनदेनमा सामेल नभएको र कुनै किसिमको भ्रष्टाचार प्रमाणित नभए त्यस्तो झुठो आरोप लगाउने बाबुराम गलत हुन् र उनी माथी हदै सम्मको कारबाही हुनै पर्छ। तर यदि उनको आरोपको पुष्टि भएको खण्डमा, आरोपित सबै जेल जानै पर्छ। तर को सहि वा को गलत ? त्यसको निर्क्यौल कस्ले गर्ने ? कसरी गर्ने ? छिनोफानोकोलागि नै भएपनि कमसेकम छानबिन हुनै पर्ने देखिएको छ। दुई मध्ये एक पक्ष सहि ठहरिने हो। दुबै पक्ष सहि वा दुबै पक्ष गलत, त्यसो त कदापि हुन सक्दैन। आशा गरौं, छानबिन हुने छ। को झुठो, को निर्दोष जनसमक्ष आउने छ।
– मदन बस्नेत । भक्तपुर, सुर्यबिनायक, हालः टाेराेन्टाे ।